သေနတ် အဘိဓမ္မာကို တူးဆွကြည့်ခြင်း (သို့) ကံ့ကော် ၀မ်းနည်းမှတ်တမ်း
ကဗျာ သေနတ် အဘိဓမ္မာကို တူးဆွကြည့်ခြင်း (သို့) ကံ့ကော် ၀မ်းနည်းမှတ်တမ်း
Thursday, 05 July 2012 00:59 | Written by စံ ညိ မ်းဦး| | User Rating: / 0
PoorBest ( ၁ )မန္တလေးကျောင်းဆောင်နံရံမှာသွေးနဲ့ရေးခဲ့“၇ ဇူလိုင်ကိုမမေ့ကြနဲ့” တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ၅၀ ကစာသားမြောင်းမြသား ကျောင်းသားကိုကျော်ဝင်းရဲ့
နောက်ဆုံးအရေးအသားအားလုံးကိုယ်စားသူ့ကိုယ်ကသွေးနဲ့မှာခဲ့တဲ့သမိုင်းဝင်သွေးစကားအခု . . . နှစ် ၅၀ ပြည့်ခဲ့ရာဒါဟာ . . .ငါမမွေးခင်က အဖြစ်အပျက်တွေဒါဟာ . . .ငါမမွေးခင်က အစုလိုက်အပြုံလိုက် လူသတ်ပွဲအမှုအခု . . .ငါမမွေးခင်ကထဲက ရှိခဲ့တဲ့လူသတ်အဘိဓမ္မာဟာငါမွေးပြီးတော့လည်း ရှိလို့ဆိုတော့ကာငါ့မှာနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်ရအဲဒီလို နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်ရငါ့တိုင်းပြည်သမိုင်းကိုငါဟာ အရူးအမူးတူးဆွလို့။
( ၂ )တူးဆွတူးဆွကြည့်တော့ရာဇ၀င်မြေထုဟာတုန်ဟီးငို၊ ရှိုက်ညီးသံတို့အထပ်ထပ်သွေးစိမ်းနံ့တို့အလွှာလွှာငါတူးကြည့်တယ်တစ်ထပ်ပြီးတစ်ထပ်တစ်လွှာပြီးတစ်လွှာအနက်ရှိုင်းဆုံးအလွှာမှာတော့သန့်ရှင်းသောအရိုးတွေ တောင်ပုံရာပုံအလိုခွပ်ဒေါင်းတို့ရဲ့ နီစွေးသောသွေးခဲအလွှာငါ့ရင်ဟာတဆတ်ဆတ်ရာဇ၀င်ထဲကယမ်းနံ့ဟာတဖျပ်ဖျပ်ယမ်းနံ့လိမ်းကျံကံ့ကော်ရနံ့ဟာတပျံ့ပျံ့အော်မိုက်မလင်းနိုင်ဘုအမိုက်ဇာတ်ကိုရွှင်ရွှင်ကြီး ‘က’ ခဲ့သူတို့ရဲ့ သေနတ်အဘိဓမ္မာငါအံ့သြ သြချရမိပါတယ်ငါအံ့သြ သြချရမိပါတယ်အဲဒီလိုငါအံ့သြ သြချရမိတဲ့ ငါ့တိုင်းပြည်သမိုင်းရယ်တဲ့လေတူးဆွ။
( ၃ )တူးဆွတူးဆွကြည့်တော့၁၉၆၂ တဲ့ဘ၀တွေ အားလုံးမှောင်ကြီးကျအ၀ီစိမှာ ပိန်းပိတ်သွားရတဲ့နှစ်ကာလများရဲ့ အစပေပဲ။
အဲဒီမှာ၇ ဇူလိုင်လူသတ်ပွဲ တဲ့ကျွန်းဆွယ်အရေးအခင်း တဲ့တက္ကသိုလ်ရွှေရတုလှုပ်ရှားမှု တဲ့ဦးသန့်ဈာပန အရေးအခင်း တဲ့၇၅ ဇွန် ၆ ကျောင်းသားသပိတ် တဲ့မှိုင်းရာပြည့် တဲ့အလုပ်သမားအရေးအခင်း တဲ့ရှစ်လေးလုံး အရေးတော် ပုံ တဲ့. . . . . . . . . . . . . .တဲ့. . . . . . . . . . . . . .တဲ့အဲဒီအထဲမှာမှ၇ ဇူလိုင်အရေးတော်ပုံဟာအထင်ကရနဲ့မမေ့နိုင်စရာနဲ့နောက်ဥဒါန်းဘယ်မကျေစရာနဲ့ဒါဟာဗမာပြည်ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲရဲ့အစစစ်အာဏာရှင်ဖီဆန်မှုရဲ့အစမဆလမျက်နှာဖုံးကိုခွာချပြကျောင်းသားတိုက်ပွဲများရဲ့အစစစ်ဖိနပ်အောက်ကကမောက်ကမပညာရေးကို ဆန့်ကျင်ခြင်းရဲ့အစပြီးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့ဆိုင်းဆင့်သံ။
( ၄ )တကယ်တော့၇ ဇူလိုင် ၆၂ ဆိုတာခွပ်ဒေါင်းတောင်ပံခတ်သံတဖျပ်ဖျပ်ဘယ်ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုမျိုးကိုမှ လက်မခံတဲ့ရပ်တည်ချက်နဲ့ခွပ်ဒေါင်းသတ္တိလက်ဆင့်ကမ်းအရေးတော်ပုံယုံကြည်ချက်အတွက် တွန်ကျူးသံမှာဒီမှာ အကျဉ်းစခန်းဒီမှာ ငရဲခန်းဒီမှာ ဘ၀ဒီမှာ အသက်အိုခွပ်ဒေါင်းအပေါင်းတို့ငဲ့သင်တို့ရဲ့တောင်ပံများရွှေရောင်တောက်ပတတောင်ကျိုးတတောင်ဆက်လို့အတောင်ပံအဆက်ဆက်နဲ့လမ်းဖြစ်လို့။
အခုသေနတ်သံမှာမိုင်းခွဲသံမှာနားပင်းသွားရတဲ့ ကံ့ကော်ပွင့်တွေကို အမျှဝေရမယ်။
သွေးစွန်းသွားရတဲ့ကံ့ကော်ပွင့်တွေကို အမျှဝေရမယ်။အခုဘ၀ဖြိုအမုန်းမှာမျက်ရည်ယိုဗုံးမှာအတုံးအရုန်းကျသွား အဓိပတိလမ်းကိုအမျှဝေရမယ်။ဒီမိုကရေစီနှင့်အတူ ကြေပြုန်းသွားတကသ အဆောက်အအုံနံရံများကိုအမျှဝေရမယ်။အမျှဝေရမယ်။
( ၅ )၇ - ၇ - ၆၂အမုန်းသမိုင်းကိုစတင်ခဲ့သူတို့ရဲ့ရက်စက်ခြင်းမှာညနေ ၅ နာရီ ၃၀ မိနစ်ကံ့ကော်မြေကိုလောင်တိုက်သွင်းပစ်မလို့တဲ့( သနက - ၄ ) တင်စစ်ကားနှစ်စီးအကာလရဲ့မီးကို ထွန်းညှိလို့။
အစွယ်တလက်လက်သွားရေတမြားမြားလုံထိန်းဟာဘီလူးယိမ်းနဲ့ ဂျီသရီး ဂျီဖိုး သစ်တွေကိုပိုက်လို့ပစ်စမ်း ပစ်စမ်း၃ မိနစ်ပစ် ၂ မိနစ်နား ၃ မိနစ်ပစ်ပစ်စမ်း ပစ်စမ်းအဆုံးမတော့ ရေဒီယိုကကြေငြာပါတယ်
၁၇ ဦးသေဆုံးသတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုတာမုသာဝါဒရဲ့ ဒုတိယကိုယ်ပွားကျောင်းသားတိုက်ပွဲသမိုင်းမှာတော့ရာကျော် ကျောက်တိုင်ဆိုတာရှိခဲ့ပါပြီကော. . ကံ့ကော်။
ကံ့ကော်ရေမျက်မြင်သက်သေတွေကိုခေါ်ရရင်မန္တလေးဆောင်၊ ရာမညဆောင်၊ ပင်းယဆောင် နံရံကကျည်ဆံရာတကသ မြက်ခင်းစိမ်းနဲ့ အဓိပတိလမ်းကံ့ကော်မြိုင်တန်းရေသင်ကိုယ်တိုင်လည်း မျက်မြင်သက်သေပါပဲလေ။
အခုအပ်တိုတစ်ချောင်းမှမပါသူတို့ကိုဓားဓားချင်း လှံလှံချင်း ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရဲရင့်လိုက်ကြပုံများအလျား ၇၇ လက်မ၊ အနံ ၆၂ လက်မရာကျော်ကျောက်တိုင်ဟာ နာကျင်စရာပန်းခွေချကြအလေးပြုကြ
( ၆ )ဇူလိုင် ၇ ရက် × × ၇ ရက်ဇူလိုင်မမေ့နိုင်တဲ့ကျောင်းသားသမိုင်း × × ထာဝစဉ်နီ . . .ငါတို့ဆိုတယ်။
၁။ “မျက်စိမ်းသွေးပေကံ့ကော်ကြွေသည်ဤမြေမည်သို့ဖြစ်သနည်း” တဲ့ငါတို့ဆိုတယ်။
၂။ “သားသေကိုမှမမြင်ရသည်မိဘကံခေဆိုးစွတကား” တဲ့ငါတို့ဆိုတယ်။
၃။ “ပင်ပျိုဆက်လက်အညွှန့်တက်ကိုရက်စက်သူများ ချိုးပစ်သည်” တဲ့ငါတို့ဆိုတယ်။ငါတို့ဆိုတယ်။ငါတို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။
(၇)အိုစစ်အာဏာရှင်တစ်ဆက်အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့ယဇ်ပူဇော်အရသာခံရက်သူတို့ယဇ်ပလ္လင်ထက်သင်တို့သေနတ်အဘိဓမ္မာဆီကငါတို့ရခဲ့တာကြောက်မက်ဖွယ်စကားနှစ်ခွန်းဘ၀အားလုံးနစ်မွန်းခဲ့ရာ . . .ဟုတ်ကဲ့ . . .၁။ “ဓားဓားချင်း၊ လှံလှံချင်း ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင် သွားမတဲ့” တဲ့။၂။ “ စစ်တပ်ဆိုတာ ဘယ်တော့မှမိုးပေါ် ထောင်မပစ်ဖူး” တဲ့။
ဘာပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ ငါတူးဆွရခဲ့မိသမျှနှစ် ၅၀ ပြည့်ခဲ့အရေးတော်ပုံယုံတယ်ဘယ်လိုမတရားတဲ့ ဖိနှပ်ချုပ်ချယ်မှုမျိုးကိုမဆို( ဘယ်သမိုင်း ခောတ်မှာမဆို )မူတစ်မှုန်မျှတောင် အလိုမရှိတော်လှန်စိတ်ဓာတ်၇ ဇူလိုင်ကပေးတဲ့စိတ်ဓာတ်အဲဒီစိတ်ဓာတ်ကိုသစ္စာငတ်သူ ( ငါတို့ )ရင်နဲ့လက်ဖျံမှာကပ်လို့။
သိကြကျောင်းနံရံကိုလည်းမထိနဲ့ဒေါင်းအလံကိုလည်းမဖိနဲ့ ဆိုလား . . .ဒေါင်းအသံ ဒေါင်းမာန်နဲ့ဒေါင်းတမန်တို့ အိုးဝေတေးကိုသီလို့။
သိကြခွပ်ဒေါင်းဆိုတာအမှန်တရားဆိုတာအမှန်တရားဘက် ထာဝစဉ်မပြောင်းလဲစတမ်းရပ်တဲ့ဇာနည်အမှောင်မှာ အဆန်ကိုပျံနေမယ့် သစ္စာဌက်နံနက်မိုးသောက်ရင်တော့အလင်းဆွတ်ရစမြဲပေါ့ ကံ့ကော်ရယ် . . . . ။
စံ ညိ မ်းဦး
အပိုဒ် ( ၆ ) ပါ သုံးကြောင်းကဗျာအချို့မှာ ၇ ဇူလိုင်အရေးတော်ပုံအပြီး ထွက်ရှိတဲ့ ‘ တက္ကသိုလ်ဝန်းကျင်ကဗျာများ’ စာအုပ်ကဖြစ်ပါတယ်။
၁။ တရားခံ ၂။ စစ်နှင့်ပြည်သူ ၃။ တိုင်တည်ခြင်း ၄။ တန်ဘိုးမသိသူ
( ဗကသ ) နှင့်အတူ ကိုအောင်ဆန်း၊ ကိုဗဟိန်း၊ ကိုအောင်ကျော်၊ အာဏာရှင် ကိုလှရွှေမှသည် ဟယ်ရီတန်၊ ကိုသက်၊ ကိုဗဆွေလေး၊ ဆလိုင်းတင်မောင်ဦးတို့အလယ်
ကိုဖုန်းမော်၊ ကိုစိုးနိုင်တို့အဆုံး စသည်ဖြင့် ဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေးသမိုင်းကို အသက်အသွေးဖြင့် လမ်းပြခဲ့ကြသည့် မြောက်မြားစွာသောအာဇာနည်၊သူရဲကောင်း အပေါင်းတို့အား ယခုကဗျာဖြင့် ဦးညွှတ်ဂုဏ်ပြုပါ၏။ Share on facebook
ယနေ့ လည်ပတ်သူဦးရေ424မနေ့က လည်ပတ်သူဦးရေ538ယခုလ လည်ပတ်သူဦးရေ10577စုစုပေါင်း531101We have:3guests, 1 bots onlineToday: May 19, 2013Visitors Counter